USultan waseBrunei uthola isibhamu sakhe sokuqala sokugoma i-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeBrunei Breaking » USultan waseBrunei uthola isibhamu sakhe sokuqala sokugoma i-COVID-19
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zeBrunei Breaking • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
USultan waseBrunei uthola isibhamu sakhe sokuqala sokugoma i-COVID-19, umkhankaso kazwelonke owethulwe
Ngemuva komjovo wokuqala wethamo, uSultan uvumile ukuthi uhlelo lokugoma lwe-COVID-19 lukazwelonke luzoqala
Uhlelo lokugoma i-COVID-19 lukazwelonke lwaseBrunei luqala kusasa
Kusukela ngo-Agasti 2020, iBrunei yenze amalungiselelo okuqalisa kohlelo lokugoma
IBrunei inikeze ukugunyazwa okukhethekile ngemithi yokugoma emithathu ye-COVID-19 ezosetshenziswa ezweni
EzaseBrunei Ministry of Health umemezele ukuthi iSultan yaseBrunei ithole isilinganiso sokuqala somuthi wokugoma i-COVID-19, njengoba izwe lilungiselela ukukhishwa kohlelo lukazwelonke lokugoma oluqala kusasa.
Ngokwenkonzo, uSultan Haji Hassanal Bolkiah wathola umthamo wakhe wokuqala wokujova umjovo we-COVID-19 esigodlweni sasebukhosini u-Istana Nurul Iman. Ngemuva komjovo wokuqala wethamo, uSultan uvumile ukuthi uhlelo lukazwelonke lokugoma i-COVID-19 lunikezwe umphakathi ngezigaba.
Kusukela ngo-Agasti 2020, iBrunei yenze amalungiselelo okuqalisa kohlelo lokugoma ezweni. Izwe lisungule ikomidi le-COVID-19 Vaccine technical Committee elizocwaninga, libuyekeze futhi lihlolisise imishanguzo ye-COVID-19 etholakala emakethe ukuze kuqinisekiswe ukuthi imigomo esetshenziswa ezweni iphephile, isebenza kahle futhi isezingeni.
Ngokuya ngocwaningo oluningiliziwe nokuhlolwa, iBrunei inikeze ukugunyazwa okukhethekile kwemithi emithathu yokugoma i-COVID-19 ezosetshenziswa ezweni, okuwukuthi umuthi wokugoma i-Oxford-AstraZeneca COVID-19, umuthi wokugoma we-Pfizer-BioNTech COVID-19 kanye nomuthi wokugoma we-Sinopharm COVID-19.
UMnyango wezeMpilo uthe lesi sigunyazo esikhethekile, esaziwa nangokuthi Isigunyazo Sokusetshenziswa Kwezimo Eziphuthumayo, esokuvikela ukutheleleka nge-COVID-19 ngesikhathi sezimo eziphuthumayo zomphakathi noma ubhadane, inhloso yalo ukusiza ukufinyelela nokugoma ukulwa nobhadane olungena zibhekele ukugcizelelwa okuphezulu kunqubo yokuphepha, ukusebenza kanye nekhwalithi.
Akuwona ama-brothels kuphela, abaqwayizi nezidakamizwa ...